बाहिर बिहानैदेखि लाइन, दलालहरू खुसुखुसु भित्र :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा सेवाग्राहीहरू। तस्बिर: निर्मला घिमिरे/सेतोपाटी
यातायात कार्यालय चाबहिलको अवस्था झनै नाजुक छ। त्यहाँ सेवाग्राहीले औंठाछापका लागि चाबहिल पुग्नुपर्छ, लिखित दिन सुकेधारा र ट्रायलका लागि दक्षिण ढोका धाउनुपर्छ।
सेवाग्राहीहरूले पाउने दुःख दिनभरि लाइन बस्ने र कोठा चहार्ने मात्र होइन, कार्यालयको अक्षमताका कारण उनीहरू दलालहरूको फन्दामा पनि परिरहेका छन्। आज हामी त्यसैबारे चर्चा गर्दैछौं।
यातायात कार्यालयहरूमा धेरैजसो सेवाग्राही पालो नपाइने डरले बिहान ६ बजे नै पुग्छन्। उनीहरू आएदेखि झ्याल रूँघेर बस्छन्। झ्यालहरू साढे १० बजेबाट मात्र खुल्न थाल्छन्।
जसै झ्याल खुल्छन्, अनि सुरू हुन्छ तँछाडमछाड।
यातायात कार्यालय एकान्तकुनाको कुरा गरौं। यहाँ भवन नम्बर १ को भुइँतल्लामा रहेको कोठा नम्बर ८ मा दरखास्त दर्ता हुन्छ। बायोमेट्रिकका लागि बिहानैदेखि लाइन बसेकाहरू बाहिर हाँपदाँप गर्दै हुन्छन्। त्यही बेला केही व्यक्ति सुटुक्क भित्र छिरेर कर्मचारीहरूलाई खुसुखुसु काम गराइरहेको देखिन्छ।
‘हामी बिहानैदेखि लाइन बस्ने, तपाईंहरू चाहिँ खुसुखुसु छिर्न दिने?’ एक युवा सुरक्षाकर्मीका अगाडि चर्को स्वरले चिच्याउँछन्।
पछाडि लाम लागेको हुल ती युवाको स्वरमा स्वर मिसाउँदै चिच्याउन थाल्छन्।
भित्रभित्रै केही बेर खुसुखुसु काम गरेपछि झन्डै ११ बजेबाट बल्ल लाइन बसेका सेवाग्राहीको पालो आउँछ। सुरक्षाकर्मी चेनल गेट खोेलेर एक हुल सेवाग्राहीलाई भित्र हुल्छ्न्।
बल्लतल्ल पालो पाएकाहरूको पनि भित्र छिर्नेबित्तिकै सरासर काम हुँदैन। कार्यालयको सर्भर बेलाबेला ह्याङ भइरहन्छ। कहिले फोटो खिचाउँदा खिचाउँदै, कहिले औंठाछाप लगाउँदा लगाउँदै सर्भर अड्किएर दस-पन्ध्र मिनेट ट्वाँ परेर बस्नुपर्छ।
बायोमेट्रिकको काम सकिएपछि लाइन लाग्ने पालो हो, कोठा नम्बर १०।
त्यहाँ झन्डै एक-डेढ घन्टा लाइन लागेपछि दरखास्त दर्ताको राजस्व तिर्ने पालो आउँछ। लाइन लाग्दालाग्दै दुई बज्यो भने काम रोकिन्छ। भोलिपल्ट फेरि धाउनुपर्छ।
यति दुई ठाउँमा लाइन लाग्दैमा काम सकिन्छ भन्ने चाहिँ नठान्नु!
ट्रायलको पालोसम्म पुग्न सेवाग्राहीले आधा दर्जनभन्दा बढी कोठाका झ्यालमा यसैगरी लाइन बस्नुपर्छ। राजस्व तिरेपछि लिखित जाँचको पालो कहिले आउँछ भनेर थाहा पाउन अर्को झन्झट छ।
‘कर्मचारीहरूलाई सोध्दा झर्किन्छन्। यस्तो सामान्य जानकारी लिन पनि दलालको भर पर्नुपर्छ। यस्तोउस्तो भनेर हैरान पार्छन्। सोझासाझालाई त देख्नेबित्तिकै पैसा माग्न थालिहाल्ने रहेछन्,’ कार्यालयमा भेटिएका श्रीकृष्ण पुडासैनीले गुनासो गरे।
लिखित दिने दिन हाजिरीका नाममा एक घन्टा उभ्याइन्छ। त्यसपछि परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न झन्डै दुई घन्टा लाइन बसेपछि बल्ल पालो आउँछ।
लिखित पास भएपछि ट्रायल दिन दुई-तीन दिनदेखि एक सातासम्मै कुर्नुपर्छ।
यसरी कार्यालयको सेवाप्रवाह छिटोछरितो नहुँदा छिट्टै पालो मिलाइदिने बहानामा दलालहरू चलखेल गरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरू सेवाग्राहीजस्तै भएर उभिइरहेका हुन्छन्। सेवाग्राहीको गुनासो सुनेझैं गर्छन् र छिट्टै पालो मिलाइदिन्छु भनेर ठग्छन्।
मंगलबार हामी एकान्तकुना पुग्दा यातायात कार्यालयको गेटअगाडि एक महिला अलमलमा परेकी थिइन्। दुई जना मानिस उनलाई पछ्याउँदै थिए।
‘केका लागि आउनुभएको? केही समस्या छ? छ भने भन्नुस् है, हामी मिलाइदिन्छौं,’ दुईमध्येका एक पुरूषले ती महिलालाई एकोहोरो सोधिरहे।
‘लाइन बस्नुपर्दैन?’ ती महिला भन्दै थिइन्।
हातमा कागजात बोकेकी ती महिला गेटनजिकै गएर उभिइन्। उनीहरू एक कुनामा साउती मार्दै डिल गर्न थाले।
लाइन नबसी सेवा पाइने लोभमा धेरै सेवाग्राही यसरी नै दलालको फन्दामा पर्छन्। केहीले पैसा लिएर काम मिलाइदिन्छन्, केही भने कामै नसकी टाप कस्छन्।
लिखित परीक्षाको नतिजा मोबाइलमै पठाइदिने भन्दै ठग्नेहरू पनि कार्यालय परिसरमा उत्तिकै भेटिन्छन्। केही दिनअघि त्यस्ता ठगको फन्दामा परेका दुई युवती हस्याङफस्याङ गर्दै कार्यालय परिसर आइपुगेका थिए। एक जना दलालले लिखित परीक्षाको नतिजा मोबाइलमा पठाइदिने भनेपछि उनीहरूले ६०-६० रूपैयाँ तिरेका रहेछन्।
‘साँझ नतिजा आएन। पास भयौं कि फेल भयौं थाहै भएन। त्यही भएर बिहानै आएको,’ दुईमध्ये एक युवतीले भनिन्।
यातायात कार्यालयले लिखित परीक्षाको नतिजा आफ्नो फेसबुक पेजमै सार्वजनिक गर्छ। यसबारे जानकारी नभएकाले नतिजा हेर्न कार्यालय धाउनुभन्दा मोबाइलमै पाइने सुनेपछि पैसा दिन राजी भएको उनीहरूले बताए।
‘आउँदा २०, जाँदा २० गरी ४० रूपैयाँ यसै सकिन्छ। मोबाइलमै रिजल्ट आउने भए त ६० रूपैयाँ ठिकै हो भनेर दियौं तर रिजल्ट आएन। हामी ठगियौं,’ अर्की युवतीले भनिन्।
यस्ता दलालहरू उपत्यकाका सबै यातायात कार्यालयमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।
खासगरी लिखित परीक्षा दिने मिति तुरून्तै पार्न, लिखितमा फेल भए पनि केही दिनमै फेरि परीक्षा दिन दलालहरूको भर पर्ने सेवाग्राही टन्नै भेटिन्छन्।
दलालहरूको सबभन्दा बढी सक्रियता ट्रायलमा हुन्छ। एकचोटि ट्रायल फेल भइयो भने अर्कोचोटि दिने पालो १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र बल्ल आउँछ। दलालहरूलाई पैसा खुवायो भने चाहिँ एक सातामै फेरि ट्रायल दिन पाइन्छ। लाइसेन्स लिन हतार भएकाहरू त्यस्ता दलालको फन्दामा सजिलै पर्छन्।
यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्मा सेवाग्राहीलाई यसबारे सचेत गराइरहेको बताउँछन्। अत्यधिक चाप र कर्मचारी संख्या कम भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उनी स्वीकार गर्छन्।
यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङका कर्मचारी भने कतिपय सेवाग्राहीले लाइसेन्स नवीकरण पनि दलालमार्फत् गराइरहेको बताउँछन्।
'नक्कली लाइसेन्स बनाएका कतिपयले नवीकरण गर्दा पोल खुल्ला भनेर दलाल गुहार्छन्,' यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङका एक कर्मचारीले भने।
त्यहाँका कार्यालय प्रमुख सञ्जय थापा पनि आफूहरूले सेवाग्राहीलाई सजग गराइरहेको बताउँछन्। सजग गराउँदा गराउँदै कतिपयले लाइन बस्नुको झन्झटले दलालको सहायता लिने गरेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले त कार्यालयको कुन सेवा कुन कोठामा भनेर प्रस्टै लेखिदिएका छौं। टोकन सिस्टम राखेका छौं। दलालहरू छैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। कोही दलाल सेवाग्राहीकै भेषमा आउँछन् भने हामी चिन्दैनौं। कसैको निधारमै दलाल भनेर लेखिएको हुँदैन,’ उनले भने।
सेवाग्राहीकै कमजोरीका कारण दलालहरूले हाबी हुने मौका पाउने हुँदा आफ्नो सेवा आफैं लिन उनी सुझाउँछन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १६, २०७८, २०:४०:००